मध्यवर्ती cystitis: etiology र क्लिनिक
मध्यवर्ती cystitis - एक विकृति, अज्ञात मूल को pelvic दुखाइ, र बारम्बार urination सँगसँगै। विकृति एक सुविधा भडकाऊ प्रतिक्रिया को थैली को submucosa मा विकसित छ। cystitis यस प्रकारको - महिलाहरु मा pelvic दुखाइ को एक साधारण कारण।
वैज्ञानिकहरूले बाहिर कुनै स्पष्ट निदान मापदण्ड हुन्, रोग को pathophysiology र etiology आंकडा सक्छ रोग 120 वर्ष को लागि विज्ञान गर्न जानिन्छ, अब तर नगरेसम्म बताए। यो रोग को etiology मूत्र संक्रमण, antiproliferative कारक, autoimmune तंत्र, hypoxia सम्बन्धित विश्वास छ थैली सुनिंनु यसको पर्खाल, उपकला रोग, अंग mucosa मा मस्त सेल एकाग्रता बढ्छ। यी कक्षहरू जो biologically सक्रिय यौगिकों, को रिलीज लागि जिम्मेवार छन् सुनिंनु को mediators। धेरै महिलाहरु तथाकथित पोस्ट-coital cystitis सेक्स भइरहेको पछि केही घण्टा निरन्तर चिन्तित छन्। यो रोग को घटना को संयन्त्र महिला urethra को anatomical संरचना संग सम्बन्धित छ। सहवास समयमा योनी खकार को urethra मा हुन्छ र भडकाऊ प्रतिक्रिया को विकास provokes।
मध्यवर्ती Cystitis: लक्षण
रोग को मुख्य लक्षण - तीव्र, को थैली मा नियमित दुखाइ, बारम्बार urination, एक imperious चाहनाको सँगसँगै छ जो। "मध्यवर्ती cystitis" को एक निदान विरामी सेक्स को समयमा दुखाइ र बेचैनी महसुस। दुखाइ को प्रकृति र तीव्रता गंभीर बल्न, असह्य दुखाइ, को थैली, योनी, जांघों, पशुको चाक, perineum मा अनुवादित गर्न नम्र देखि फरक हुन्छ।
cystitis मा के गर्न? रोगी आफ्नो निदान सजग हुन्छ र उपयुक्त उपचार सुरु प्राप्त गर्नु अघि, यसलाई डाक्टर क्लिनिक नियमित निरर्थक भ्रमणमा बनेको छ जो धेरै वर्ष मा एक असहमत र कठिन बाटो लामो, बित्दै। एकदम अक्सर विरामीहरु एंटीबायोटिक उपचार को असफल पाठ्यक्रम undergo छ। स्थिति धेरै चिकित्सकहरु सल्लाह दिन्छन् भन्ने तथ्यलाई द्वारा exacerbated छ outpatient उपचार को थैली आक्रामक केमोथेरापी (जस्तै, नाइट्रेट Argentum) मा instillation संग। महिला अक्सर अंतरालीय cystitis रेकर्ड भयो। तथ्याङ्क महिलाहरु को घटना दस पटक उच्च मानिसहरू भन्दा छ भनेर देखाउँछ।
मध्यवर्ती cystitis लामो दृढता क्लिनिक संग इतिहास र शारीरिक परीक्षा को आधार मा निदान छ (बारम्बार urination, pelvic दुखाइ, जोडतोडले) समान लक्षण संग रोगहरु हटाइ पछि। भने रोग एक संक्रामक प्रकृति को pathologies देखि भिन्नता हुनुपर्छ: tuberculous cystitis, vulvovestibulit, Bartolini, भाइरल, जीवाणु vaginitis।
को gynecological (pelvic भडकाऊ रोग, endometritis, fibroids, ovulatory दुखाइ, लैंगिक atrophy, आदि), urology (विकिरण cystitis, मूत्राशय क्यान्सर, मूत्राशय आउटलेट बाधा, urethritis, urolithiasis), स्नायविक (पार्किंसंस रोग बारे भूल छैन, detruoza hyperactivity, धेरै काठिन्य, स्पाइनल stenosis, cerebrovascular विकृति, कम फिर्ता दुखाइ, आदि), रोग, मध्यवर्ती cystitis सदृश जो लक्षण। किनभने अयोग्य निदान सम्भव अनावश्यक hysterectomy (को गर्भाशय हटाउन) र laparotomy (कम-इनवेसिव शल्य चिकित्सा) को।
उपचार को तरिका खराब छन्, तर कुनै पनि पुरानो रोग संग, तिनीहरूले जीवनको गुणस्तर, साथै थैली समारोह को रिकभरी सुधार उद्देश्य छन्।
Coxarthrosis ग्रेड 3: हिप surgically र हस्तक्षेप बिना उपचार
हामी कालो मल, वा रोगहरु को त्रुटि-रहित निदान के भने
लक्षण, को कारण र कटि हर्निया को उपचार
कारण तातो पानी बल्छ भने: उपचार
को कुहिनो संयुक्त मा तरल पदार्थ: कारण, लक्षण र उपचार सुविधा
दुर्बलता को कारण
एक कोठा को क्षेत्र कसरी पाउन मा व्यावहारिक सल्लाह
मिश्र को प्राकृतिक अवस्था के हो?
सपना पुस्तकमा हेर। मासु - मात्र स्वादिष्ट, तर पनि उपयोगी छैन
Orlova ओल्गा: पूर्व सदस्य को जीवनी र व्यक्तिगत जीवन "शानदार"
ताल Aiat Sverdlovsk क्षेत्र मा: मनोरञ्जन, माछा मार्ने
ग्याँस Convectors। समीक्षा
हतार मा "Snacks"। घर व्यञ्जनहरु: द्रुत र स्वादिष्ट
कस्मेटिक्स प्रकृति Siberica: ग्राहक समीक्षा र निष्कर्षमा
निर्देशक र निर्माता व्लादिमीर Rogovoy: सिनेमा
यदि पीठ दुख्छ भने, के गर्नु पर्छ?
आहार हेलेन मालेशिवा: समीक्षा र सार को